मामाले गरे आफ्नै भान्जालाई नाटकीय शैलीमा अप,हरण ! घर मालिक नै शंकाको घेरामा -
मामाले गरे आफ्नै भान्जालाई नाटकीय शैलीमा अप,हरण ! घर मालिक नै शंकाको घेरामा
माघ १०,काठमाडौं-धनुषाको नगराइन–६ लगमाका ६ वर्षीय चन्दन दास शनिबार दिउँसो १ बजेतिर घरछेउको पसलमा चकलेट किन्न गएका थिए। तर, घर नफर्केपछि परिवारमा हल्लीखल्ली म,च्चियो। छिमेकमा सोधखोज गरे पनि चन्दनको पत्तो लागेन। साँझ ५ बजे अचानक चन्दनकी आमाको मोबाइलमा नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो। ‘तपाईंको छोरालाई अपह,रण गरिएको छ, १ करोड रुपैयाँ फिरौती दिनुस् अनि छोरा लग्नुस्’, फोन गर्नेले भने। फिरौती माग्दै फोन आउनेबित्तिकै अभिभावकले प्रहरी चौकी लगमा ९जटही०मा खबर गरे। प्रहरी चौकीबाट तत्काल त्यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा खबर गरियो।
समय खेर नफाली प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरले विशेष टोली परि,चालन गर्‍यो। घट,ना,को खबर पाएको तीन घण्टाभित्र प्रहरीले अप,हरणमा संलग्न अभियुक्त प,क्राउ गरी नाबालकलाई सकुशल मुक्त गर्‍यो। प्रहरीले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पत्रकार सम्मेलन गरी अपह,रण घट,नाका आरो,पित २० वर्षीय रामरतन दास भनिने लक्ष्मेश्वरकुमार दासलाई सार्वजनिक गरेको छ । दास ती नाबालकका मामा हुन्। लक्ष्मेश्वरले नाबालक भान्जा चन्दनलाई पसलबाटै बाइकमा घुमाइदिन्छु भन्दै फकाएर लगेको प्रहरी अनु,सन्धानले देखाएको छ।
‘आर्थिक लोभमा नातागोता पनि बिर्सिएर यो अप,राध गरिएको हो’, घट,नाबारे जानकारी गराउँदै धनुषाका एसपी प्रकाश रानाभाटले भने।अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ! लक्ष्मेश्वरले भान्जालाई लिएर जनकपुर उपमहानगरपालिका–७ माछाबजारस्थित एक घरमा लगेका थिए। अप,हरण योजनामा उक्त घरका मालिकको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंकामा छानबिन भइरहेको एसपी रानाभाटले बताए। डेराकै घरमा भान्जालाई लुकाएर बसेको अवस्थामा प्रहरीले दासलाई प,क्राउ गरेको हो।अभियुक्तवि,रुद्ध अपह,रण तथा शरीर ब,न्धक कसुरमा मुद्दा अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले चन्दनलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।
Previous सैन्य विमान दुर्घ,टना
Next बाल विवाह नारामा सिमित ! बाल बिबाह गरेको आरो पमा बेहुला र उनका बुवा पक्रा उ